Nangona nje, ubugcisa bokwakha ngumsebenzi ozimeleyo onokuthi uzise ukoneliseka okuninzi kunye nezibonelelo zezinto eziphathekayo, kodwa indlela yokuqalisa umsebenzi njengomzobi ayilula kwaye ayimfutshane. Ukongeza kwinqanaba elicacileyo lokufunda kunye nokufunda okunzulu, umakhi onqwenelayo kufuneka abe lilungu le-IARP (Igumbi labacebisi beRiphabhlikhi yasePoland).
Unokuba ngumyili wezinto njani?
Isihloko senjineli yoyilo sinokufunyanwa emva kokugqiba izifundo zokuqala zomjikelo. Isidanga senkosi kwinjineli yoyilo sifunyanwa emva kokugqiba izifundo zomjikelo wesibini. Nangona kunjalo, isihloko asikugunyazi ukuba uqhelisele lo msebenzi kwangoko. Ngokomthetho wasePoland, ngumntu kuphela okwoluhlu lweCandelo lamaNzululwazi yeRiphabhlikhi yasePoland ongumyili wezakhiwo okwaziyo ukwenza lo msebenzi. IARP ke ngoko kuphela kwesango lomsebenzi abanqwenela ukuba bayile banqwenela ukugqiba iprojekthi yabo yokuqala yorhwebo.
Bona kwakhona: UKUBA uyilo lweBhaso lowama-2020 yohlobo lweMetalco kwindawo yokuhlala enebhasi, eyinxalenye yeprojekthi yeSODART
Igumbi labacebisi beRiphabhlikhi yePoland ngumzimba obuyeyona nto iphambili kummiselo kukhuseleko lwezikhala kwaye ngaphezulu kwayo yonke into eyakhiwe njengeyona nto ilungileyo eluntwini. Ukongeza, IARP ijonga ukusebenza ngokuchanekileyo kwemisebenzi yobugcisa esetyenziselwa kulwakhiwo kwaye ijonge umgangatho wobungcali bolwakhiwo osetyenziswe kubuchule bokwakha. Ngokucacileyo, oku kubekwa kweliso kugubungela kuphela amalungu eChamber of Architects yeRiphabliki yasePoland. Ngesi sizathu, kubaluleke kakhulu kumyili omncinci ofuna ukwenza eyakhe yokuqala iprojekthi yentengisoukuba lilungu le-IARP.
Imisebenzi kunye nemisebenzi yeChamber of Architects yeRiphabliki yasePoland
Igumbi labacebisi beRiphabhlikhi yasePoland likwajongana neminye imisebenzi eyongezelelweyo, ebandakanya, phakathi kwezinye izinto: ukugcina umsebenzi womyili wezakhiwo njengezimeleyo, ukukhusela isihloko se-IARP Architect, ukuphuhlisa inani lemigangatho enxulumene nokusebenza komsebenzi ngabakhi bezinto zokwakha, ukusebenza kwemigaqo nokulungelelanisa imirhumo kwimirhumo yamalungu, kunye kunye nokufuna ukwazisa inkqubo ehambelana nenkqubo ye-EU kwiiyunivesithi zasePoland.
Ekwenzeni imisebenzi eyongezelelweyo, i-IARP isebenzisana noorhulumente wokuzilawula weenjini zokwakha. IChamber of Architects yeRiphabhlikhi yasePoland ikwasebenza kunye neminye imibutho ukuze kufezekiswe iinjongo zayo. I-Chamber of Architects yeRiphabliki yasePoland ayiloxanduva kuphela lokumisela imigqaliselo yomsebenzi kunye nemigangatho, kodwa ikwajongana nomsebenzi wezemfundo, owenzululwazi, owenkcubeko kunye nobuchwepheshe.
Ngaphandle komsebenzi obanzi we-IARP, kufanele kukhunjulwe ukuba eyona njongo yayo iphambili kukukhusela indawo kunye nolwakhiwo njengelungelo loluntu. Yonke imisebenzi kunye nolwakhiwo lonke lwe-IARP zilungiselelwe ngokuthe ngqo le njongo, kwaye yonke imisebenzi esecaleni kufuneka ibonwe njengokongezwa kulo msebenzi ungxamisekileyo.
Ubume be-IARP buqulathe Igumbi leLizwe leZakhiwo kunye nabasemagunyeni, kunye namagumbi ezithili ezi-16 zezakhiwo.
Amalungelo amalungu kunye noxanduva
Ngokubakho kwe-IARP, amalungu anokuqiniseka ngamalungelo athile kunye namalungelo abangayi kukwazi ukonwabela ngaphandle kokuba ngamalungu kwigumbi. Kwelinye icala, ukuba lilungu leChamber of Architects yeRiphabliki yasePoland kukwaquka nezibophelelo ezithile.
Le misebenzi ibandakanya: ukugcinwa kokuziphatha okuhle nokuziqhelanisa nemithetho yayo, ukusebenzisana neChamber of Architects yeRiphabhlikhi yasePoland, ukuthobela imigaqo kunye nemithetho enxulumene nolwazi lobugcisa kunye wempahla, ukuthatha isigqibo malunga nezisombululo ze-IARP kunye nokuhlawula iifizi zobulungu obuqhelekileyo.
Amalungu e-IARP angathembela kula malungelo kunye namalungelo alandelayo: banokusebenzisa imisebenzi yokunceda kunye noncedo lwezomthetho lwegumbi, kwaye banokuthembela kuncedo ekuphuculeni iziqu zabo zobungcali.
IKomishini yokuQinisekiswa kweMigangatho yeSizwe
Xa ubhala malunga neChamber of Architects yeRiphabhlikhi yasePoland, akunakwenzeka ukuba ungayichazanga iKomiti yesiQinisekiso seLizwe. Inoxanduva lokubonelela ngeziqinisekiso zemfundo. Ngumzimba okhethekileyo ochaziweyo nakwimimiselo yegumbi. Ngaphandle kwamathandabuzo, nawuphina umntu onqwenela ukuba ngumzobi wezakhiwo onqwenela ukufumana amabanga emfundo kuya kufuneka ajongane neKomiti yesiQinisekiso seSizwe. Ukongeza, imisebenzi yeKomiti yesiQinisekiso seSizwe ikwabandakanya ukubeka esweni imisebenzi yeekomiti zokhetho, kunye nemisebenzi yayo ichazwa ngumthetho nemimiselo ekufuneka isebenze kuyo.
Ukuxhaswa ngemali kweChamber of Architects yeRiphabhlikhi yasePoland
Ukuze i-IARP isebenze, kufuneka isebenze ii-asethi ezithile. Ngeenjongo zokuxhasa ngemali imisebenzi yayo, iChamber of Architects yeRiphabliki yasePoland ifumana imali kwiintlawulo zobulungu, kwimisebenzi yeshishini, kwiminikelo nakwinkxaso mali, nakwezinye iimali ezingenayo. Imisebenzi yoqoqosho enokuthi iqhutywa ngamagumbi ezithili kunye neqela eliphambili le-IARP ayipheleli apho, nangona kunjalo, ayinakuba yimisebenzi yotyalo-mali kunye nemisebenzi kwicandelo loyilo, lokwakha, lwemisebenzi yoluntu kunye novandlakanyo lolwakhiwo. Izithintelo ezinjalo kufanele ukuba zingamangalisi nakubani na - imisebenzi yeshishini ayifanele ichaphazele inkululeko yeChamber of Architects yeRiphabhlikhi yasePoland.
Igumbi elisezantsi laseSilesian Chamber of Architectsigumbi labakhi bezinto zokwakhaindlu yabakhi bezinto zakhiwo gdańskIgumbi labacebisi uKatowiceIgumbi labakhi beZakhiwo Krakowindlu yezikhepheindlu yabakhiqizi yokungenaIgumbi labakhi bezakhiwo eLublinIgumbi labacebisi bezinto zakudala Olsztynindlu yabakhi bezindlu poznańIgumbi labakhi beRiphabhliki yePolandkwiNdawo yeZakhiwo zeRiphabhliki yePolandIndawo yokuGqiba abaCwangcisi beSilesianigumbi labayili bokwakhaIgumbi labacebisi bemfazwe Warsawigumbi labakhi bezakhiwo wrocławIgumbi lesizwe labakhi bezinto zokwakhaIgumbi labaqulunqiI-Małopolska Chamber of ArchitectsIgumbi leSithili se-Ma ChambopolskaIgumbi leMazovian of ArchitectsIgumbi leSithili seMasovianIgumbi leOpole of ArchitectsIPalamente yeNdawo yeZakhiwoIPomeranian Chamber of ArchitectsIndawo yokuGqiba abaCwangcisi beSilesianIgumbi leSithili seSilesianIqela leWelkopolska Chamber of ArchitectsI-West Pomeranian Chamber of Architects